Usoro na ọnọdụ nke £ 5 Free Welcome daashi
Nke a nkwalite bụ nanị dị na nti akaụntụ ọhụrụ ịgụ agadi 18 ma ọ bụ karịa.
The bonus ga-otoro ọhụrụ akụkọ n'elu ihe ịga nke ọma nkwenye nke adreesị ozi-. Ọ dịghị ego na-achọrọ.
Ọ nwere ike na- 10 oge ka bonus ịnara otuto.
Naanị otu bonus kwa cha cha ahịa.
Daashi bụ nti 28 ụbọchị mgbe akwụmụgwọ. Mgbe oge a, daashi ga-akwụsị nti na fọdụrụ ego ga-ewepụ akaụntụ gị.
A na-enye dị site na 2nd January 2015 ruo mgbe gara n'ihu amamọkwa.
Nke a bonus eburu a 100x wagering chọrọ. The £ 5 ga-wagered ọ dịghị ihe ọzọ 100 ugboro tupu a ndọrọ ego nwere ike. N'ihi ya, i kwesịrị Wager 100 x £ 5 = £ 500 tupu ị nwere ike ịdọrọ gị ego.
Wagers on Blackjack ma ọ bụ ruleti adịghị eme ka Mbelata nke wagering chọrọ bonus ọtùtù.
Oke winnings site na nke a bonus ga-capped na £ 20. Nke a pụtara na naanị a kacha nke £ 20 a ga-atụkwasịkwara gị withdrawable itule. Ọ bụla fọdụrụ itule uku na ego n'elu ọma wagering ga-voided.
Nke a bonus nwere ike na a ga-eji na-egwu na ihe ọ bụla nke anyị oghere egwuregwu.
Kacha nta ndọrọ ego bụ £ 10. Player ga edeba aha a nti ugwo kaadị, maka nzube nke withdrawals.